Miss myanmar’s pots2011 (copy from mm celebrity) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » Miss myanmar’s pots2011 (copy from mm celebrity)
Miss myanmar’s pots2011 (copy from mm celebrity)
Posted by kuroko on Feb 3, 2011 in Events/Fundraise, News |9comments
လွန်ခဲ့တဲ့.. ရာစုနှစ်ထဲ ကျန်ခဲ့တယ်လို့မြင်တယ်.။
တိတိကျကျဆိုရင် ..စစ်ပြီးခေတ်လောက်က .. မယ်ဗမာတွေ ဟန်ပေါ့..။
တိုင်းပြည်ဦးဆောင်နေတဲ့ သူတွေ.. ပါဝါရှိသူတွေရဲ့ … အသက်တန်းကို မှန်းလို့ရတယ်..။
ရင် မပေါ်ရဘူး .. အရိပ်လောက်ပဲ ရှိရမယ် .. ချိုင်းမွေး ရိတ်ထားရမယ် .. တင် ထမီ မပါးရဘူး ..ဖင်ကောက်ပြရမယ် .. မြန်မာ့ရိုးရာကို ထိန်းသိမ်းရမယ် .. နိုင်ငံတော် အဆင့် .. ဒါပဲ .. (အခု ရင်ဘတ်မှာ ဇာ ကပ်တဲ့ အင်္ကျီ ၀တ်ထားတာ တွေ့တယ် .. ဒါ အသစ်ပဲ)
ယောက်ျားတွေ ဘောင်းဘီပဲ ၀တ်ရမယ် .. (သူတို့မိန်းမတွေ လာကြည့်မှာ မို့လို့)
အခုခောတ်ကာလ လူငယ်တွေဟာ မယ်ဆိုရင် နှာခေါင်းရှုံ့ချင်ပြီး မလုံ့တလုံ မော်ဒယ်တွေကိုတော့ လိုက်ပြီးအတုခိုးနေတတ်ကြသောကြောင့် များများတင်ပေးစေလိုပါတယ်…….မြန်မာဆန်ဆန်က ဘယ်လောက်ကျက်သရေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်……… ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့…..
ဒီဝတ်စုံကြီးတွေက ဒိတ်အောက်နေပြီ ။ အစဉ်လာမပျက်အောင်သာ လုပ်နေကြတာ ..။ ဘစ်ကနီနဲ့ မယ်ပြိုင်ခိုင်းပါလား ဒါမှ မော်ဒယ်လေးတွေကို အမှီ ကျော်တတ်နိုင်မှာ
မြန်မာဆန်ဆန် ကျက်သရေရှိတယ်ဆိုတာ အခုခေတ်ရဲ့ အမြင်ပါ။ အရင်ခေတ်က ဒါမျိုးတွေကို အကြီးအကျယ် ရှုံ့ ချပြောဆိုခဲ့တာပဲ။
ဒါမျိုးတွေကို အရင်ခေတ်က ပါတီ (အခုခေတ် Club) တက်တဲ့ အခါ ၀တ်ကြတာပါ။
ဘယ်မယ်ကတော့ဖြင့် ဘာကောင်ကြီးရဲ့ဘာ။ ဘယ်မြို့ တော်ဝန်ရဲ့ဘာဆိုပြီး ပြောကြတာပဲ။
ဘုရင်ခေတ် အ၀တ်အစားတွေကိုကြည့်ရင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့အ၀တ်အစားဟာ အပေါ်ပိုင်းက ရင်လျှားသာသာပါပဲ။ အောက်ပိုင်းဆိုရင်လဲ အကွဲ (အခွဲ) နဲ့ ပါ။ အခုခေတ်နဲ့ ယှဉ်ရင် တိုတာနဲ့ ရှည်တာပဲကွာတာ။ ဖော်တာတော့ ဖော်တာ ကုလားကြီးနဲ့အရာကြီး အတူတူပါပဲ။ ခေတ်ကာလပြောင်းလဲခြင်းကို လက်မခံလို့ မရပါ။ ရာဝင်ဒယ်ကြီးများကို ကော့ကော်ကံကား လုပ်ပြခြင်းသည် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာဆန်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ထို့ ကြောင်း အားလုံးသေပြီး နှစ်အတော်ကြာလျင် ယခုခေတ် မော်ဒယ်များအား အလွန် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မြန်မာဆန်သည်ဟု နောက်ခေတ်လူများ မှတ်ချက်ပေးကြဦးမည်။
မြန်မာဆန်သည် ဟူသော ပေတံကြီးသည် မည်သည့် အတိုင်းအတာ ယူနစ်ကို စံထားပါသနည်း ????
အော်……… ဒါတော့သူ့အယူအဆနဲ့သူပေါ့ ……. ပိစိကွေးကတော့ မြန်မာမိန်းခလေးတစ်ယောက်မြန်မာလိုလေးဝတ်ထားရင် ကျက်သရေရှိတယ် ယဉ်တယ် လို့ပဲယူဆတယ်……….. ကိုယ်ထင်ကုတင်ရွှေနန်းဆိုတာကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား အရင်ခောတ်ဆိုတာကိုတော့မမှီလိုက်လို့မသိဘူး……. အခုခောတ်မှာတော့ မဟာဆန်တယ်လို့ 100 မှာ 95 ယောက်ကပြောကြမှာပဲ ကျန်တဲ့5ယောက်က မကောင်းမြင်ဝါဒကြီးစိုးနေလို့ ………
Korea မှာ မြန်မာလို ( ထမိန်။ ခါးတို ရင်ဖုံးအကျီ လက်ရှည်နဲ. ၀တ်တော့ very sexy တဲ့လေ .ကိုယ်လုံးတွေကိုပေါ်လွင်စေလို့တဲ့ ။ ကဲ.. အဲဒါ ၂၀၀၁-၀၂ ကပြောခံရတာ .
တော်တော်တော့ ခံရခက်တာ ဘောင်းဘီတိုဝတ် က . ဘာမှမမြင်ရတဲ့ဝတ်စုံကို အဲလိုပြောတော့
လှတော့ လှပါတယ်… ကျွန်တော့်အမြင်ကျတော့ နည်းနည်း ဒိတ်အောက်နေတယ်လို့ ထင်မိတယ်.. အသက်အရွယ်ကြောင့်လားတော့ မသိဘူး…